Vatyairi vaVaTsvangirai Vanobvisiswa Mari yeChibatiso
Vatyairi vaviri vemutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, vamiswa pamberi pedare neChipiri kuBeitbridge kwakare vakabhadhariswa mari yechibatiso inoita zana remadhora pamunhu.
Vaviri ava vakasungwa neChishanu kuBeitbridge, vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weRoad Traffic (Construction, Equipment and Use) Regulations kana Section 29 (3) of Statutory Instrument 154 of 2010.
Vaviri ava, avo vanoti VaClifford Sanyika naVaJoshua Mhuruyengwe, vakasungwa vachibva kuSouth Africa vachinzi vainge vaine ma beacon lights anoshandiswa nemotokari dzemapurisa kana dzechiuto.
Hazvisi kutsanangurwa kuti mabhikoni aya aive mumotokari here, kana kuti pamusoro pemotokari. Vaviri ava vanga vachimirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ari mumatunhu eMatabeleland neMidlands.
Imwe nhengo yesangano iri, VaLizwe Jamela, vaudza Studio7 kuti vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa uye vari kutarisirwa kudzokera kumatare edzimhosva mukupera kwesvondo mbiri.
Mune imwe nyaya, vatsigiri veMDC gumi nevatatu vakasungwa kuManicaland vachipomerwa mhosva yekuita musangano zvisiri pamutemo.
Vasungwa ava vanonzi havana kupihwa chikafu changa chauya nehama dzavo, uye hazvisi kuzivikanwa kuti vachamiswa riini pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita misangano isina kuziviswa mapurisa.